Malunga nathi-Bazhou City Dcl fanicha Co, Ltd.
Bazhou City Dcl fanicha Co, Ltd.
1. Imveliso eyenziwe ngokwezifiso: Uphuhliso olomeleleyo kunye neqela lophando lenze imibono yakho ibe yinyani. Kwaye isampulu inokubonelelwa.
2. Inkqubo engqongqo yokulawula umgangatho: umgangatho osemgangathweni kuyo nayiphi na inkqubo, ukujonga izinto, umgca wemveliso, ukupakisha kunye nemveliso ngokwayo. Sinokufikelela kwisatifikethi se-BSCI kunye ne-FSC kunye nokufikelela e-UK.
3. Ukohlulwahlulwa kwemveliso: Izitayile ezahlukeneyo ezifanelekileyo zonke iimarike ezahlukeneyo, izitayile zaseYurophu nezaseAsia.
4. Inkonzo ethembekileyo emva kwentengiso: Akukho sizathu kodwa sisisombululo.
5. Abasebenzi abaziingcali: bonke abasebenzi bethu abanobuchule banamava atyebileyo kwizinto zabo eziphambili.
Ifenitshala yeDCL ithumela ngaphandle iimveliso kumazwe amaninzi kunye nakwimimandla eYurophu, eMelika, Middle East, Southeast Asia njl.njl.
Umgangatho yinkcubeko yethu, kwaye siwujongile umgangatho, inkonzo kunye nokhuphiswano kakhulu.
Umzi-mveliso wethu Uyingcali kwitafile, isofa kunye nemveliso yesitulo kubandakanya
▷ UKUGQIBELA USIHLALO / USIhlalo weBar / USIHLALO WOKUGCINA
▷ I-OTTOMAN / STORAGE POUF / BENCH
▷ UKUGCINWA KWESICWANGCISO / ISICWANGCISO SOKUGQIBELA / ISICWANGCISO SOKUGQIBELA
I-SINGNAL SOFA / 2 SEATER SOFA / MULTI-SEATER SOFA
▷ IBHODI SHELF / ISITHUBA SAMANZI